အရောင်အီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်စက္ကူနှင့်ယခင်ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖန်တီးပါ eReaders အားလုံး
စာရွက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောအရောင် e-ink မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပါ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းပထမဆုံး ereaders နှင့်အရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ များစွာသောလူများအတွက်ရိုးရာမဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်အရောင်စာအုပ်အဆင့်သို့မရောက်ရှိနိုင်သောအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာပစ္စည်းများ။ သို့သျောလညျး, ဒီနည်းပညာသေးရင့်ကျက်သည်မဟုတ်နှင့်လာမည့်လများ၌ကြောင်းမျှော်လင့်ရသည် ဒီမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.
ဆွီဒင်ရှိ Chalmers နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်သိပ္ပံနည်းကျပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အရောင်အီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည် အပိုအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးမပြုဘဲ panel မှထုတ်လွှတ်သောအရောင် သို့မဟုတ်သင် refresh rate တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုထက်ဝက်လျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ panel သည်အီလက်ထရောနစ်မင်၏အတွေးအခေါ်နှင့်နည်းပညာကိုမစွန့်ဘဲ LCD screen ကဲ့သို့ထိရောက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
၎င်းသည်ရွှေ၊ အဖြိုက်နက်နှင့်ပလက်တီနမ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော porous layer ကို ပေါင်း၍ အရောင်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့်အလင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဒါစေသည် panel သည်အရောင်များကိုထုတ်လွှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစက္ကူစာရွက်ပေါ်တွင်ကြည့်သည် တက်ဘလက် LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်သောအရာများထက် ဒါ့အပြင် ဒီဖန်သားပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိအရောင်မျက်နှာပြင်ရှိသောစာဖတ်သူကိုပုံမှန်စာဖတ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဆရှိသည်။
အရောင် nanostructure အောက်တွင်ရှိသောလျှပ်ကူးအလွှာ၏အခြေအနေကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ဤတိုးတက်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံး၏ရလဒ်သည်လူတို့သိမြင်သည့်အတိုင်းအရောင်များ၏တိကျမှုနှင့်မှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
ဒီ panel ဒါမှမဟုတ် screen မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားလည်းရှိပါတယ် စက္ကူကဲ့သို့ကွေးခြင်းနှင့်မျှမျှတတပါးလွှာအထူရှိသည်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အထူးသဖြင့်။ ဤအရည်အသွေးအားလုံးသည်ရလဒ်ကိုဖတ်ရှုသူများအတွက်နှင့်အရောင်လိုအပ်သောအခြားကိရိယာများအတွက်သင့်တော်သောဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ကိုဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်သင့်တွင်စွမ်းအင်သိပ်မရှိသလောက်သို့မဟုတ် lcd ဖန်သားပြင်များကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏အောင်မြင်မှုသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိသေးပါ သူတို့ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဒီ panel ကိုထုတ်လုပ်ရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ သို့သော်ပြbigနာနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်။
ကြည့်ရသည်မှာဒီနည်းပညာ၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်အလွန်တတ်နိုင်ပေမယ့်ဒီဘောင်များတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည် ပလက်တီနမ် (သို့) ရွှေကဲ့သို့သောစျေးကြီးသောပစ္စည်းများဖြစ်သောရွှေကဲ့သို့လိုအပ်သည်ဒါကြောင့်ဒီအကြီးစားနည်းပညာကြီးထွားလာဖို့ကုန်ကျစရိတ်များ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်လတွင်ဤဖန်သားပြင်နှင့်ဖတ်ရှုသူများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ၂၀၂၁ သို့မဟုတ် ၂၀၂၂ တွင်သတ်မှတ်ထားသော ရက်မှစ၍ ဈေးကွက်တွင်မျက်နှာပြင်ရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကုမ္ပဏီအများအပြားအပေါ်အာရုံစိုက်ထားသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည် ereader စျေးကွက်ဝင်တိုက်.
ကျနော်တို့လက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်ရှိသည် Pocketbook အရောင် y Pocketbook InkPad အရောင်, အရောင်မျက်နှာပြင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးစွာသောရလဒ်များကိုပြသသောနှစ်ခုစက်ပစ္စည်းများ။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းစတိုးဆိုင်များထိမှန်မည့်အခြားကိရိယာများကိုမေ့မထားဘဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဆွီဒင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏တိုးတက်မှုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ereader ဆိုသည်မှာ Amazon Kindle မတိုင်မီကတည်ရှိခဲ့သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းတစ်လနီးပါးကြာသောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိရိယာကိုလူကြိုက်များပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အလားတူပုံသေနည်းအရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ ereaders နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြပါ ဝယ်လိုအားဟာစာဖတ်သူများရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်။ ဒီတော့ငါဒီလိုနည်းပညာသုံးတာဟာအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက .- Fuentes
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » စာရွက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောအရောင် e-ink မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပါ
တောင်းဆိုမှုများအများဆုံးအတွက်အီလက်ထရောနစ်မှင်မော်နီတာ Onyx Boox Mira Pro